Thwebula Truecaller 7.71 – Vessoft
Truecaller – a software ukuthola izinombolo ezifihliwe futhi idatha of the сaller. Truecaller uxhuma kwiseva ngesikhathi ucingo olungenayo, uthola inombolo database futhi ubonisa ulwazi mayelana isikhokhelo. Isofthiwe isebenzisa i database evulekile izinombolo zocingo zivela emazweni amaningi namafinobhuku jikelele abasebenzisi for ukuzimisela elikhiqizayo izingcingo ezingaziwa. Truecaller ikuvumela ukuba ukuvimba izingcingo okungafunwa, SMS esiyingozi kanye nombono izinombolo of spammers main sezweni noma emazweni angaphandle kusukela database of the software. Truecaller ilungisa ngokuzenzakalelayo imininingwane oxhumana of the software futhi ethandwa zokuxhumana nabantu.
Ukuthola izingcingo kufihlwe kanye idatha caller
Database Large of izinombolo zocingo
Block of namakholi angenayo SMS
Presence ohlwini nezinombolo spammers eziyisisekelo
Amazwana on Truecaller:
Truecaller Ahlobene software:
Abanye Umhumushi popular ngokusekelwa izilimi eziningi ezivela service Google. Isofthiwe kwenza ukuhumusha umbhalo kusuka izithombe futhi uvo ngesandla izwi.
Abanye Ithuluzi ukuqaphela amathrekhi omculo kanye abaculi. Isofthiwe isebenzisa microphone ukuze uqophe imithombo umsindo bese uqhathanisa izinsalela melody ne database isicelo.
Abanye Ithuluzi esikahle ukuguqula izwi. Isofthiwe isebenzisa imiphumela eminingi ukuguqula imiyalezo izwi futhi kukhona ikhono ukusetha ifayela usindiswe njengoba ringtone.
English, Українська, Français, Español... Amazon 6.4.0.100
Abanye Isicelo nge iqoqo wokuqukethwe ehlukahlukene izimpahla ezivela inkonzo popular Amazon. Isofthiwe kwenza lo thwebula izicelo eziningi futhi imidlalo.
Abanye The popular sezulu iTheyiphu ne izibikezelo ezinembile. Isofthiwe kwenza ukuqapha izinguquko last in sezulu kanye yesikhathi eside izibikezelo ngesimo imidvwebo.
Abanye Isofthiwe ukuphatha inkonzo ethandwa kakhulu ukuthengwa nokudayiswa imikhiqizo ehlukahlukene. Isofthiwe isebenzisa search uhlelo elula kwezimpahla namasevisi izigaba eziningi.
Abanye Isofthiwe ukubuka langempela izindaba nezihloko ezivela enye yezindawo ezinkulu amabhizinisi ulwazi. Isicelo inikeza ukwaziswa qualitative futhi ezithakazelisayo ngezenzakalo emazweni ehlukene.
Abanye Isicelo isikhulu inkonzo popular ukubuka okuqukethwe isiqophi ezahlukene. Isofthiwe isekela uhla amathuluzi ukuhlela ividiyo futhi wokulayisha yakhe emva inethiwekhi.
Abanye Le service mahhala izicelo ahlukahlukene futhi imidlalo okuyinto esikhundleni Google Play. Isofthiwe kuhlanganisa ezihlukahlukene izigaba futhi incazelo eningiliziwe umkhiqizo.
English, Français, Español, 中文... Facebook Messenger 109.0.0.24
Inethiwekhi Yokuxhumana Chat The kulula ukuyisebenzisa Isithunywa ukuxhumana nabangani kusukela ethandwa amanethiwekhi omphakathi. Isofthiwe kusekela Voice namakholi wevidiyo futhi isiqophi ingqungquthela mode.
English, Français, Español, Deutsch... Adobe Reader 17
Izandiso PDF Isofthiwe ukusebenza nge amafayela PDF futhi imibhalo avikelwe nge password. Isicelo baxhumana Acrobat USB ifu esikahle ifayela thwebula futhi ubuke imibhalo esendaweni of Ukukhipha.
English, Français, Español, Deutsch... Evernote 7.1.4
abahleli Ithuluzi ukudala amanothi ezahlukene nobe tinhla. Isofthiwe isekela ukuvumelanisa nge-akhawunti yakho kanye ukufinyelela ulwazi olugciniwe kusukela kumadivayisi ezahlukene.
English, Français, Español, 中文... Ask.fm 4.2.2
Inethiwekhi Yokuxhumana Isofthiwe ukuphatha inkonzo ethandwa imibuzo nezimpendulo. Isofthiwe baxhumana nezinye amanethiwekhi popular social.